Tim Cook Wuxuu Yiri 2020 Wuxuu Ahaa Sannadkii Ugu Fiicnaa Innovation | Waxaan ka socdaa mac
Tim Cook ayaa wareysiga toddobaadkan ku sheegay in 2020 wuxuu ahaa sanadkii ugu fiicnaa taariikhda Apple inta hal-abuurnimana laga hadlayo. Si daacadnimo ah ayaan u diidanahay wax badan. Haddii aysan ahayn mashruuca Apple Silicon, ee aad u baahan tahay inaad iska siibto koofiyaddaada, haddii kale, hal-abuurnimo yar.
5G lagu daro iPhones, ma ahan wax cusub. Waa in lagu sii jiido tartanka suuqa mobilada. Ka mid noqoshada cabirka oksijiinta ee Apple Watch, waa la sameyn karaa sanado ka hor. IPhone SE horey ayuu u jiray. Iyo naqshadeynta iPad Air 4, horey ayaan ugu ogaanay iPad Pro. Marka si daacad ah, Tim, kuma raacsani bayaankaaga.
Isbuucaan Tim Cook wuxuu siiyay wareysi gaar ah shir-jaraa'id He Shijie, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Beijing Post iyo Jaamacadda Isgaarsiinta. Wadahadalkan, Maamulaha guud ee Apple wuxuu ku sheegay in 2020 ay ahayd "sanadkii ugu fiicnaa ee hal-abuurnimada taariikhda Apple."
Sanadkii 2020, Apple waxay sii deysay alaabooyin badan oo cusub, oo ka bilaabmayay khadka iPhone 12, illaa iPads cusub, Apple Watch Series 6 iyo SE, iyo dabcan kuwa cusub. Apple Silicon Macs. Waxaas oo dhan, ayuu Tim Cook sheegay in Apple ay hal-abuurnimada sameysay 2020 in ka badan sanad kasta, laakiin sidoo kale waxay xustay in "aysan jirin qaacido cad oo hal-abuurnimo ah."
Shijie ayaa weydiiyay Cook ku saabsan cadaadiska joogtada ah iyo habka Apple ay u marto soo saarista alaabooyin cusub sanad walba. Cook wuxuu ku jawaabay inay isaga inteeda badan tahay inuu isu keeno dadka leh awoodaha kala duwan, taariikhdooda, iyo hamigooda, una suurta geliya inay qabtaan shaqada ugu fiican noloshooda, iyo in “hal lagu daray mid waligiis laba jeer ayuu ka badnaa Apple«.
Hal-abuur iyo iskaashi ayaa ku neefsada Apple Park
Wuxuu raaciyay Apple Park inay neefsato a dhaqanka hal-abuurka iyo dhaqanka iskaashiga. Labadan shay isla marka la isku daro, markay is dhexgalaan, waxay abuuraan hal-abuurnimo ballaadhan. Dadka leh awooda kaladuwan ayaa isu yimaada, kuwaas oo aduunka u arka si ka duwan, laga yaabee inay ka kala yimaadeen meelo kala duwan, asal ahaan kala duwan. Qaarkood waa khabiir ku takhasusay qalabka, qaarna software-ka. Iyo kuwa kale oo ka socda aagga adeegga. Xitaa waxaa jira fannaaniin iyo farshaxanno. Muhiimadu waxay tahay inaad kuligood wada dhigtaan ujeedo guud, si aad u qaabeysaan wax soo saar aan caadi aheyn, waana wax cajiib ah waxa ka soo bixi kara midowgaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Tim Cook wuxuu leeyahay 2020 wuxuu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa ee hal-abuurnimada taariikhda Apple
Maxaa ku cusub marinka Khariidadaha Apple ee Imaaraadka Carabta